नेपालको फुटबलमा तहल्का पिट्दै आइरहेका सुनिल बल को हुन् ? « Onlinetvnepal.com
नेपालको फुटबलमा तहल्का पिट्दै आइरहेका सुनिल बल को हुन् ?
Published : 12 September, 2018 2:13 pm
साफ च्याम्पियनसिपअन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई ४-० ले पराजित गर्दा सुनिल बलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । सिनियर राष्ट्रिय टोलीमा तेस्रो पटक खेलिरहेका सुनील पहिलो पटक सुरुआती रोजाइमा परेका थिए ।
भुटानविरुद्ध सुनीलले १ गोल गर्नुका साथै २ असिस्ट प्रदान गरेका थिए । २१ औं मिनेटमा सुनीलकै कर्नरमा अनन्त तामाङले हेडरमार्फत गोल गरेका थिए । ७१ औं मिनेटमा विमल घर्तिमगरको पेनाल्टी गोलरक्षकले रोकेपछि फर्केर आएको बलमा उनले गोल गरे । ८८ औं मिनेटमा उनकै कर्नरमा निराजन खड्काले गोल गरेका थिए ।
वर्षीय सुनीलले सन् २०१६ मा लाओसविरुद्ध भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यु गरेका थिए । उमेर समुहमा पनि उनले लगभग सबै प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । हेटौंडा घर भएका सुनिलले एन्फा एकडेमीमा रहेर आफ्नो बाल्यकाल बिताए । विमल घर्तिमगर, अन्जन विष्ट, अनन्त तामाङ जस्ता खेलाडीको ब्याच रहेकाले उनको नाम कमै चर्चामा रहेको हो ।
सन् २०१५ मा साफ यू-१९ च्याम्पियनसिप जित्ने टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए । उनकै फ्रिकिकमा नेपालले उक्त प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा उपाधि दावेदार मानिएको अफगानिस्तानलाई पराजित गरेको थियो ।
उनी इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा पनि टोलीमा रहेका थिए । घरेलु फुटबलमा उनी रुस्लान थ्री स्टार क्लबबाट खेल्ने गरेका छन् । त्यसअघि उनले संकटा र सुदूरपश्चिम फुटबल क्लबबाट पनि खेलेका थिए । हाम्रो खेलकुद